Soo dejisan Amazon Kindle 4.16.0.75 – Android – Vessoft
Amazon shidin – software in uu akhriyo buugaagta, wargeysyada iyo joornaalada ka soo shirkadda Amazon. Software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto iyo iibsado buugag ama dukumentiyada kale ee dukaanka ugu weyn buugga. Amazon shidin qaamuus ka dhisay-in oo awood u aragto qeexitaanka ereyga iftiimiyeen in adeega Wikipedia ama ilo kale oo macluumaad ah ee internet-ka. Amazon shidin taageertaa .Wadashaqayntaas koonto ogolaanaysa in aad ku akhriyaan buugaag ka kaydinta meel u danbeeyay ee qalabka kala duwan. Software waxuu si ay ula qabsadaan dhalaalka shaashadda, font size, midabka asalka iyo bogga hanuuninta. Amazon shidin sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan maktabad kuu gaar ah iyo helitaanka buugaagta ama waraaqaha kale ee qaybaha kala duwan.
View iyo buugaagta ka adeega Amazon iibsan
Waxaa la dhisay-in dictionary
Synchronizations ee xisaabta
Waxay abuurtaa maktabad
Settings ah font iyo iftiin ee page
Amazon Kindle Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... B612 4.7.2
العربية, English, Français, Español... Mobdro 2.0.4
العربية, English, Українська, Français... Google Chrome 50.0.2661.89